PureOS 10 inosvika neGNOME 40, kugadzirisa uye zvimwe | Kubva kuLinux
PureOS 10 inosvika neGNOME 40, kugadzirisa uye nezvimwe
Darkcrizt | 26/05/2021 13:13 | Kugoverwa
Purism yakazarurwa mazuva mazhinji apfuura kuvhurwa kwePureOS 10, kugoverwa kweDebian-kunosanganisira chete emahara kunyorera, kusanganisira iyo inotakura neGNU Linux-Libre kernel yakachenesa isina-yemahara binary firmware zvinhu. PureOS inozivikanwa seyakasununguka zvachose neFree Software Foundation uye yakaiswa pane yakakurudzirwa nzira yekuparadzira.
Kune avo vausingazivi nezvePurism, iwe unofanirwa kuziva kuti iyi ndiyo kambani inogadzira iyo Librem 5 smartphone, akateedzana malaptop, maseva, uye mini maPC anotumirwa neLinux neCoreBoot.
KwakachenaOS, ndizvo mugove unotarisa kune zvakavanzika uye inopa dzinoverengeka sarudzo dzekuchengetedza zvakavanzika zvevashandisi. Semuenzaniso, seti yakazara yezvishandiso inowanikwa kunyorera dhata pane diski, iyo package inosanganisira iyo Tor Browser, DuckDuckGo inopihwa seinjini yekutsvaga, iyo Yakavanzika Badger plugin inotangirwa-dzivirira kudzivirira pakuteedzera kwezviito zvevashandisi paWebhu. HTTPS Kwese kupi kunotangira-kuisirwa kuendesa otomatiki kuHTTPS.
PureBrowser (Firefox inovakazve) inoshandiswa seye default browser, pamwe nedesktop iri paGNOME 3 inomhanya paWayland.
1 KwakachenaOS 10 inosimudzira
1.1 Dhawunirodha uye tora PureOS 10
KwakachenaOS 10 inosimudzira
Iyo inoshamisa kwazvo hunyanzvi yeshanduro nyowani inoenderana ne "Convergence" maitiro, iyo inopa inoteerera yekushandisa mushandisi yezvifoni uye desktop zvigadzirwa.
Chinangwa chikuru chekuvandudza ndechekupa kugona kushanda pamwe chete neGNOME application pane ese ari maviri ekugunzva skrini uye yakakura laptop uye PC skrini pamwe chete nekhibhodi uye mbeva.
Iyo yekushandisa interface inoshanduka zvine simba zvichienderana nesaizi size uye zviripo zvekushandisa zvekushandisa. Semuenzaniso, kana uchishandisa PureOS pane smartphone, kubatanidza chishandiso kune yekutarisa kunogona kushandura iyo smartphone kuita inotakurika pabasa.
Iyo PureOS Store App Manager inoshandisa AppStream metadata kuti igadzire yakasarudzika app catalog uko maapplication emafoni efoni uye makuru screen zvigadzirwa zvinogona kugoverwa.
Iyo yekumisikidza yakagadziridzwa, mairi mune rutsigiro rwekumisikidza otomatiki logon, kugona kutumira ruzivo rwekuongorora kuti uongorore matambudziko panguva yekumisikidza, uye network yekumisikidza modhi yakagadziridzwa.
Iyo GNOME desktop yakagadziridzwa kuita vhezheni 40. Iko kugona kweibhandy raibhurari kwakawedzerwa, mazhinji maGNOME zvirongwa zvinogona kugadzirisa chinongedzo chemhando dzakasiyana dzescreen pasina shanduko.
Zvevamwe zvinoshandukaizvo zvinomira pachena:
Wakawedzera VPN Wireguard.
Wakawedzera Pass password maneja uchishandisa gpg2 uye git kuchengetedza mapassword mu ~ / .password-chitoro dhairekitori.
Wakawedzera Librem EC ACPI DKMS mutyairi weLibrem EC firmware, ichibvumira mushandisi kudzora maLED, keyboard backlight, WiFi / BT maLED, uye uwane data renzvimbo yebhatiri.
Zvakare, iyo vhezheni itsva yakarongerwa kutumira pane zvakasiyana zvigadzirwa zvePurism, kusanganisira iyo Librem 5 smartphone, iyo Librem 14 laptop uye Librem Mini. Kubatanidza iwo maratidziro enharembozha uye akagadzika skrini mune chimwe chishandiso, raibhurari yerevhizheni inoshandiswa, iyo inobvumidza iwe kugadziridza GTK / GNOME kunyorera kwemafoni nhare (seti yemawadhi uye zvinhu zvinoteerera zvinopihwa).
Pamifananidzo yemidziyo, inodzokororwa rutsigiro rwekuvaka rwunopihwa kuona kuti mabhaari akapiwa anowirirana nezvinobatana. Mune ramangwana, zvakarongerwa kupa zvinodzokororwa seti kune yakazara ISO mifananidzo.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani yakaburitswa vhezheni, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha uye tora PureOS 10
Kune avo vanofarira kuyedza kana kuisa ichi kugovera kweLinux pakombuta yavo, vanofanirwa kuziva kuti iyo yekuisa ISO mufananidzo wekuparadzira inowanikwa kubva kune yepamutemo webhusaiti yekuparadzira.
Icho chifananidzo chakapihwa cheiyi vhezheni nyowani inotsigira kubhowa mumararamiro ehupenyu uye ine huremu hwe2 GB.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » PureOS 10 inosvika neGNOME 40, kugadzirisa uye nezvimwe
Zvekujekeserwa chete, hazvisi "zvemahara" kunyorera, ivo "emahara" kunyorera, yemahara software haina chekuita nemutengo, pane yemahara proprietary software izvo zviri pachena kuti havazokwanise kuisa mune iyo distro kana chinangwa chavo chiri ive 100% yemahara uye ramba uchibvumidzwa neFSF.
Pindura kuna Nozu
Vhura Sosi Libs uye Vhura Sosi Agenda: Vhura mawebhusaiti eprojekti
Vhura Mahara Ekutungamira: Webhusaiti inobatsira ine yakawanda yakavhurika sosi magwara